Paul's 1st Letter to the Corinthians – 2trondro
Home / Baiboly / Epistily / Paul's 1st Letter to the Corinthians
1:1 Paul, voantso ho Apostolin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra; ary Sostena, ny rahalahy iray:
1:2 ho ny fiangonan'Andriamanitra izay any Korinto, dia izay nohamasinina ao amin'i Kristy Jesosy, olona voantso sady masina amin'ny rehetra izay niantso ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika eny amin'ny tany rehetra ny azy sy ny antsika.
1:3 Anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ho aminareo avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
1:4 Misaotra an'Andriamanitro hatrany ho anareo, noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'i Kristy Jesosy.
1:5 By izany fahasoavana, amin'ny zava-drehetra, efa lasa mpanan-karena ao aminy, ny teny rehetra sy amin'ny fahalalana rehetra.
1:6 Ary noho izany, ny fijoroana ho vavolombelona momba an'i Kristy dia efa hery ao aminao.
1:7 Amin'izao fomba izao, na inona na inona dia tsy ampy ho anareo na amin'inona na fahasoavana, rehefa eo am-piandrasana ny fanambarana ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy.
1:8 ary, koa, Hampahery anao, na dia hatramin'ny farany, tsy misy meloka, mandra-pahatongan'ny andro ny fahatongavan'ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy.
1:9 Andriamanitra mahatoky. alalany, ianao no niantso an-hanananareo firaisana amin'ny Zanany, I Jesoa Kristy Tompontsika.
1:10 Ary noho izany, Miangavy anao aho, rahalahy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa samy miteny Toy izany koa, ary mba tsy hisy ho fisaraham-bazana eo aminareo. Tahaka izany anie ianao ho tonga lafatra, miaraka amin'ny izany saina izany sy ny fitsarana ihany.
1:11 Fa efa nilaza tamiko, momba anao, ry rahalahy, noho ny momba Chloes, fa misy fifampiandaniana eo aminareo.
1:12 Ankehitriny dia lazaiko izany noho ny tsirairay aminareo dia hoe:: "Azo antoka fa, Izaho an'i Paoly;"" Fa Izaho an'i Apollo;"" Marina tokoa, Izaho an'i Kefasy;" ary koa: "Izaho an'i Kristy."
1:13 Efa Kristy no nizarana? Voahombo tamin'ny hazo fijaliana i Paoly ho anao? Sa ianao no natao batisa amin'ny anaran'i Paoly?
1:14 Misaotra an'Andriamanitra aho fa efa vita batisa tsy misy aminareo, afa-tsy Krispo sy Gaio,
1:15 fandrao misy milaza fa efa natao batisa ho amin'ny anarako.
1:16 Ary Izaho koa nanao batisa ny ankohonan'i Stephanus. Hafa noho izany, Tsy tadidiko raha batisa hafa.
1:17 Fa Kristy tsy naniraka ahy hanao batisa, fa hitory ny filazantsara: tsy ny alalan 'ny fahendrena ny teny, fandrao ny hazo fijalian'i Kristy ho foana tsy mitondra fanatitra.
1:18 Fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay tokoa ho very. Fa ho an'ireo izay no namonjena, izany hoe, ho antsika, dia ny herin 'Andriamanitra.
1:19 Fa efa voasoratra: "Izaho ho levona ny fahendren'ny hendry, ary holaviko ny fahaiza-manavaka manan-tsaina. "
1:20 Aiza ny hendry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny marina-mitady tontolo izao? Moa tsy Andriamanitra nanao ny fahendren'izao tontolo izao ho hadalana?
1:21 Fa izao tontolo izao tsy nahalala an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahendrena, ary noho izany, ao ny fahendren'Andriamanitra, sitrak'i Andriamanitra mba hanatanteraka ny famonjena ny mpino, ny alalan 'ny fahadalan'ny ny fitoriantsika.
1:22 Fa ny Jiosy mangataka famantarana, ary ny jentilisa mitady fahendrena.
1:23 Fa izahay kosa mitory an'i Kristy voahombo tamin'ny hazo fijaliana dia. tokoa, ny Jiosy, izany dia tantara ratsy, sy amin'ny jentilisa, izany dia fahadalana.
1:24 Fa ho an'ireo izay voantso, Ny Jiosy na ny Grika, ny Kristy dia ny herim-panahy avy amin'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra.
1:25 Fa inona dia fahadalana ho an'Andriamanitra dia heverina ho hendry ny olona, ary izay fahalemena ho an'Andriamanitra dia heverina ho matanjaka ny olona.
1:26 Koa tandremo ny fiantsoana, rahalahy. Fa tsy firy no olon-kendry araka ny nofo, tsy maro no mahery, tsy firy no avo razana no.
1:27 Fa Andriamanitra efa nifidy ny adala amin'izao tontolo izao, ka dia mba hampahamenatra ny hendry. Ary Andriamanitra efa nifidy ny malemy amin'izao tontolo izao, ka dia mba hampahamenatra ny mahery.
1:28 Ary Andriamanitra efa nifidy ny iva razana sy tsinontsinona 'izao tontolo izao, ireo izay na inona na inona, ka mba hampihena ny na inona na inona ireo zavatra.
1:29 Koa dia, na inona na inona izay avy amin'ny nofo hahazo mirehareha eo imasony.
1:30 Fa ianareo no azy ao amin'i Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra ho antsika ny fahendrena sy ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary fanavotana.
1:31 Ary noho izany, Toy izany koa, voasoratra: "Na iza na iza voninahitra, hahazo mirehareha ao amin'ny Tompo. "
2:1 Ary noho izany, rahalahy, raha tonga tany aminareo, manambara aminareo ny fijoroana ho vavolombelona momba an'i Kristy, Tsy mitondra teny ambony na avo fahendrena.
2:2 Fa tsy hitsara ny tenako hahafantatra zavatra hafa teo aminareo, afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa Izy voahombo tamin'ny hazo fijaliana.
2:3 Ary izaho, raha tany aminareo, dia azon'ny fahalemena, sy ny fahatahorana, ary ny fangovitana be.
2:4 Ary ny teniko sy ny fitoriana dia tsy ny mandresy lahatra ny olona ny teny fahendrena, fa dia ny fampisehoana ny Fanahy sy ny hatsaran-toetra,
2:5 ny finoanao mba tsy ho miorina amin'ny fahendren'ny olona, fa ny herim-panahy avy amin'Andriamanitra.
2:6 Ankehitriny, isika no milaza fahendrena amin'ny efa-pitataovovonan'ny, nefa tena, fa tsy ny fahendren'izao tontolo izao, na ny an'ny mpitondra tontolo izao, izay dia nihena ho na inona na inona.
2:7 Fa tsy, no miresaka momba ny fahendren'Andriamanitra ao amin'ny zava-miafina izay efa nafenina, izay notendreny talohan'ny vanim-potoana io ho voninahitsika,
2:8 zavatra izay tsy nisy ny mpitondra eto amin'ity tontolo ity no fantatra. Fa raha izy ireo nahalala azy, izy ireo dia tsy nohomboany tamin'ny hazo fijaliana ny Tompon'ny voninahitra.
2:9 Fa izao fotsiny araka izay voasoratra: "Ny maso dia tsy mbola nahita, ary ny sofina tsy ren'ny, na efa tsy niditra tao am-pon'ny olona, ny zavatra rehetra izay efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia Azy. "
2:10 Fa Andriamanitra efa nanambara ireo zavatra ireo ho antsika ny Fanahiny. Fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra.
2:11 Ary iza no mahalala izay zavatra ny olona, afa-tsy ny fanahy izay ao izany olona izany? Dia toy izany koa, tsy misy olona mahalala ny zavatra izay avy amin'Andriamanitra, afa-tsy ny Fanahin 'Andriamanitra.
2:12 Fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo ity, fa ny Fanahy Izay avy amin'Andriamanitra, mba hahafahantsika mahatakatra ny zavatra izay efa nomena antsika avy amin'Andriamanitra.
2:13 Ary isika koa dia niresaka momba ireo zavatra ireo, tsy amin'ny teny olombelona nianatra fahendrena, fa ny fotopampianaran 'ny Fanahy, mitondra zavatra ara-panahy niaraka tamin'ny zavatra ara-panahy.
2:14 Fa ny biby toetry ny olona no tsy ho fantany ireo zavatra ireo avy amin 'ny Fanahin' Andriamanitra. Fa hadalana aminy izany, ary izy no tsy afaka mahatakatra izany, satria tsy maintsy ho nandinika ara-panahy.
2:15 Fa ny ara-panahy ny olona mitsara ny zava-drehetra, ary izy mba hotsaraina amin'ny alalan'ny tsy misy olona.
2:16 Fa iza no nahafantatra ny sain'ny Tompo, ka mba hampianatra Azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy.
3:1 Ary noho izany, rahalahy, Dia tsy afaka niteny taminareo toy ny amin'ny olona ara-panahy izay, fa toy ny hoe ho an 'ireo izay araka ny nofo. Fa ianareo dia tahaka ny zaza ao amin'i Kristy.
3:2 Nomeko ronono ianao mba hisotro, fa tsy ventin-kanina. Fa ianareo tsy mbola afaka. ary tokoa, izao ankehitriny izao ihany, ianao dia tsy afaka; fa ianao no mbola araka ny nofo.
3:3 Ary satria mbola misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo ve ianao, ary ianao tsy mandeha araka ny fanaon'ny olona?
3:4 Fa raha hoy ny anankiray:, "Azo antoka fa, Izaho an'i Paoly,"Raha ny anankiray kosa:, "Izaho an'i Apollon,"Ianao ve tsy lehilahy? Inona anefa no Apollo, ary inona moa Paoly?
3:5 Isika ihany ny fanompoam-pivavahana ho azy tao izay efa mino, araka ny Tompo omena anareo tsirairay.
3:6 Izaho namboly, Apollon nandena, fa Andriamanitra nanome ny fitomboana.
3:7 Ary noho izany, tsinontsinona izay mamboly, na izay mandena, dia na inona na inona, fa Andriamanitra irery ihany, izay manome ny fitomboana.
3:8 Ary izay mamboly, ary izay mandena, dia iray. Nefa samy handray ny valim-pitia tsara, araka ny asa mafy.
3:9 Fa isika dia ny mpanampy. Ianao ny fambolena; ianao dia ny fanorenana.
3:10 Araka ny fahasoavan'Andriamanitra, izay nomena ahy, Efa nametraka ny fototra toy ny mpanao mari-trano hendry. Fa ny hafa mandrafitra eo amboniny. Koa dia, aoka samy hitandrina tsara ny fomba manorina eo amboniny.
3:11 Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa, eo amin'ny toerana izay efa napetraka, izay ao amin'i Kristy Jesosy.
3:12 Ary raha misy mandrafitra eo ambonin'ny fanorenana, na volamena, volafotsy, vato sarobidy, hazo, misy, na mololo,
3:13 ny asan'ny tsirairay dia haseho. Fa ny andron'ny Tompo hanambara izany, satria haseho amin'ny afo. Ary afo no hizaha toetra izany tsirairay ny asa, tahaka ny ahoana izany.
3:14 Raha misy ny asa, izay efa nanorina amboniny, sisa tavela, dia handray valim-pitia izy.
3:15 Raha misy ny asa may, dia hijaly ny very, fa izy no mbola ho voavonjy, saingy toy ny avy ao amin'ny afo.
3:16 Tsy fantatrareo va fa ianareo no Tempoly 'Andriamanitra, ary ny Fanahin 'Andriamanitra velona ao anatinareo?
3:17 Fa raha misy mandika ny Tempoly 'Andriamanitra, Mba hosimban'Andriamanitra kosa izy. Fa ny Tempoly 'Andriamanitra dia masina, dia ianareo izany Tempoly.
3:18 Aza misy mamita-tena. Raha misy eo aminareo toa ho hendry amin'izao taona, aoka ho adala, ka mba ho tena hendry.
3:19 Fa ny fahendren'izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary dia toy izany no efa voasoratra: "Izaho no misambotra ny hendry ihany no astuteness."
3:20 Ary indray: "Jehovah no mahalala ny hevitry ny hendry, fa zava-poana ireo. "
3:21 Ary noho izany, aza misy manao olona ho reharehany.
3:22 Fa ny anao rehetra: na Paoly, na Apollo, na Kefasy, na izao tontolo izao, na ny fiainana, na ny fahafatesana, na ny ankehitriny, na ny ho avy. Eny, rehetra dia Anao.
3:23 Fa ianao no Kristy, ary i Kristy dia ny.
4:1 Koa, aoka ny olona hihevitra antsika ho mpanompon'i Kristy sy mpanompo zava-miafina izay an'Andriamanitra.
4:2 Eto ary ankehitriny, izany no takina amin'ny mpanompo tsirairay izay ho hita ho mahatoky.
4:3 Ary ny amiko, dia toy ny zavatra kely mba hotsaraina ianareo, na noho ny taona ny olombelona. Ary Izaho koa dia tsy mitsara ny tenako.
4:4 Fa tsy misy eo amin'ny feon'ny fieritreretana. Fa Izaho tsy nohamarinina tamin'ny ity. Fa ny Tompo no mitsara ahy.
4:5 Ary noho izany, aza misafidy ny mitsara alohan'ny fotoana, mandra-pahatongan'ny Tompo miverina. Ho asehony ny zavatra takona ao amin'ny haizina, Ary hampiseho ny fanapahan-kevitra ny fo. Ary avy eo dia samy hisy hahazo dera avy amin 'Andriamanitra.
4:6 Ary noho izany, rahalahy, Efa nanolotra ireo zavatra ireo ny tenako sy Apollon, noho ny aminareo, mba mianatra, alalantsika, fa tsy misy olona tokony inflated hanohitra olona iray, ary ho an'ny hafa, fa tsy mihoatra noho izay efa voasoratra.
4:7 Fa inona no mampiavaka anao amin'ny hafa? Ary inona no anananao, izay tsy nandray? Fa raha nandray izany, nahoana ianao voninahitra, toy ny raha tsy nandray izany?
4:8 Noho izany, ankehitriny dia efa feno, ary ankehitriny dia efa tonga mpanankarena, toy ny hoe tsy misy aminay nanjaka? Fa enga anie ka ho tianao hanjaka, mba, koa, Mety manjaka aminareo!
4:9 Fa ataoko fa Andriamanitra efa nanolotra antsika ny Apôstôly farany, toy izay voatendry ho faty. Fa efa natao ho ho fizàhan'izao ho an'izao tontolo izao, ary ny anjely, ary ny olona.
4:10 Noho izany isika adala noho ny amin'i Kristy, fa ianao no mamantatra ao amin'i Kristy? Izahay malemy, fa ianareo no mahery? Ianao no mendri-kaja, fa isika kosa dia iva razana?
4:11 Mandraka ankehitriny izao dia ora, dia noana sy mangetaheta, ary tsy manan-kitafy, ary imbetsaka nokapohina, ary isika no miovaova.
4:12 Ary izahay asa, miasa amin'ny tananay. Manendrikendrika isika, Ary toy izany no hitahy. Isika nijaly sy hiaritra fanenjehana.
4:13 Isika voaozona, ary toy izany koa izahay mivavaka. Efa tonga tahaka ny fakon'izao tontolo izao, tahaka ny mitoetra ny zava-drehetra, na dia mandraka ankehitriny.
4:14 Aho tsy nanoratra izany zavatra izany mba hampahamenatra anareo, fa mba mananatra anareo, tahaka ny tiany lahy.
4:15 Fa mety manana mpampianatra iray alina ao amin'i Kristy, nefa tsy maro ray. Fa ao amin'i Kristy Jesosy, ny alalan 'ny Filazantsara, Izaho no niteraka anao.
4:16 Noho izany, Miangavy anao aho, ho hanahaka ahy, tahaka ny anahafako an'i Kristy.
4:17 Izany no antony, Izaho no naniraka anareo Timoty, Izay no zanaka malalako, ary izay mahatoky ao amin'ny Tompo. Izy no hampahatsiaro anareo ny lalako, izay ao amin'i Kristy Jesosy, tahaka ny ampianariko na aiza na aiza, ao amin'ny fiangonana rehetra.
4:18 Misy olona efa ho inflated amin'ny nieritreritra fa tsy hiverina aminao.
4:19 Fa izaho kosa hiverina aminao tsy ho ela, raha ny Tompo no vonona. Ary Izaho no mandinika, tsy ny tenin 'ireo izay inflated, fa ny hatsaran-toetra.
4:20 Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny teny, fa amin'ny hatsaran-toetra.
4:21 Inona no tianao? Tokony miverina aminao amin'ny tsorakazo, na miaraka amin'ny fiantrana sy ny fanahin 'ny halemem-panahy?
5:1 Ambonin'ny zava-drehetra hafa, mbola lazaina hoe fa misy fijangajangana atỳ aminareo, dia fijangajangana ny karazany toy izany izay tsy teo anivon 'ny Jentilisa, mba misy olona hanana ny vadin'ny rainy.
5:2 Kanefa ianao inflated, ka tsy mba nisy nalahelo fa tsy, ka dia izay no nanao izany zavatra izany dia ho hesorina tsy ho eo aminareo.
5:3 tokoa, na dia tsy eo amin'ny vatana, Aho teo ihany ny fanahiko. Dia toy izany no, Efa nitsara, toy ny hoe teo aho, izay efa nanao izany.
5:4 Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, ianao efa tafangona ny saiko, ao ny herin 'i Jesosy Tompontsika,
5:5 hanolotra izany anankiray izany ho an'i Satana ity, hanimbana ny nofo, ka dia ny Fanahy mba ho voavonjy amin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompontsika,.
5:6 Tsy tsara ho anao ny voninahitra. Tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia manimba ny manontolo faobe?
5:7 Esory ny masirasira ela, mba ho tonga mofo vaovao, ho anao-misy masirasira. Fa Kristy, ny Paska, dia izao no sorona.
5:8 Ary noho izany, aoka isika hivoky, tsy amin'ny masirasira ela, tsy amin'ny masirasira lolompo sy faharatsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana.
5:9 Araka ny efa nanoratra taminareo teo amin'ny epistily: "Aza miara-mpijangajanga,"
5:10 Azo antoka fa tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo izao, na amin'ny tendan-kanina, na amin'ny jiolahy, na hiaraka amin'ny vahoakan'i fanompoan-tsampy. Raha tsy izany, izay tokony hiala amin'izao tontolo izao.
5:11 Fa ny nanoratako taminareo: aza miara-olona izay atao hoe rahalahy, nefa mpijangajanga dia, na tendan-kanina, na ny mpanompo ny fanompoan-tsampy, na ny mpanendrikendrika, na mamo, na ny jiolahy. Noho izany anankiray izany ho toy izany, aza tsy hihinana.
5:12 Fa inona no Izaho sy hitsara ny any ivelany? Fa aza mitsara na dia ianareo ireo izay ao?
5:13 Fa ny any ivelany, Andriamanitra no hitsara. Fa handefa olona ratsy ity hiala tsy ho eo aminareo.
6:1 Nahoana no lazaina fa na iza na iza ianareo, manana ny fifandirana momba ny sasany, no sahy hotsaraina eo anatrehan'ny iniquitous, fa tsy eo anatrehan'ny olona masina?
6:2 Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina avy izao no hitsara azy? Ary raha izao tontolo izao aza hotsarainareo anao, moa tsy miendrika, avy eo, hitsara izay zavatra madinika indrindra aza?
6:3 Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika? Koa mainka fa ny zavatra tontolo izao?
6:4 Noho izany, raha raharaha hitsarana izao, nahoana no tsy hanendry izay tena tsinontsinona ato am-piangonana mba hitsara ireo zavatra ireo!
6:5 Fa lazaiko mba hahamenatra anareo. Moa tsy misy olona eo aminareo hendry ampy, ka mba ho mahay manamboatra ny adin'ny rahalahiny?
6:6 Fa tsy, rahalahy miady manohitra rahalahy eny amin'ny fitsarana, ary izany eo anatrehan'ny tsy nahatoky!
6:7 Ankehitriny dia misy tokoa ny fandikan-dalàna eo aminareo, zavatra hafa rehetra any an-dafin'ny, rehefa manana fitsarana mifanaratsy. Tokony tsy hanaiky ianao fa tsy ratsy? Ianao no tsy tokony hiaritra fa tsy ho ambakaina?
6:8 Fa ianareo kosa manao ny nandratra sy ny fangalana, ary izany amin'ny rahalahy!
6:9 Tsy fantatrareo va fa ny iniquitous dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mifidy ny lalan-diso mirenireny. Fa fa ny mpijangajanga, na mpanompo ny fanompoan-tsampy, na mpanitsakitsa-bady,
6:10 na ny effeminate, na lahy izay matory amin'ny lehilahy, na mpangalatra, na ny avaricious, na ny mamo, na mpanendrikendrika, na ny mpanao an-keriny dia handova ny fanjakan 'Andriamanitra.
6:11 Ary ny sasany aminareo dia toy izany. Fa ianareo kosa efa absolved, fa ianao efa nohamasinina, fa ianareo kosa efa nohamarinina: rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika sy tamin'ny Fanahin'Andriamanitsika.
6:12 Ny amin'izany dia mety ny amiko, fa tsy ny rehetra no mahasoa. Ny amin'izany dia mety ny amiko, fa Izaho kosa tsy mba ho entin'ny hiverina amin'ny alalan'ny fahefan'ny olona.
6:13 Food dia ho an'ny kibo,, ary ny kibo ho an'ny sakafo. Fa Andriamanitra no mahavery ny kibo sy ny sakafo. Ary ny tena kosa dia tsy ho an'ny fijangajangana, fa ho an'ny Tompo; ary ny Tompo ho an'ny vatana.
6:14 Marina tokoa, Andriamanitra efa nanangana ny Tompo, dia hanangana antsika amin'ny heriny.
6:15 Tsy fantatrareo va fa ny vatanareo dia ampahany amin'ny Kristy? Koa dia, no hitondra ny anjara-dia an'i Kristy, ary hanao izany ho ampahany amin'ny vehivavy janga? Aoka tsy mba toy izany!
6:16 Ary no tsy fantatrareo va fa na iza na iza miray amin'ny vehivavy janga dia lasa tena iray? "Fa ny roa," hoy izy, "Dia ho tahaka ny nofo iray ihany."
6:17 Fa izay miray amin'ny Tompo kosa dia fanahy iray.
6:18 Mandosira ny fijangajangana. Fahotana rehetra na inona na inona fa ny olona manao dia eny ivelan'ny momba ny tena, fa na iza na iza fornicates, fahotana mihatra amin'ny tenany.
6:19 Sa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia ny Tempolin'ny Fanahy Masina, Izay ao aminareo, izay efa avy amin 'Andriamanitra, ary ianareo dia tsy anao manokana?
6:20 Fa efa novidina tamin'ny bidy. Omeo voninahitra ka ento an'Andriamanitra amin'ny tenanareo.
7:1 Ary ny amin'ny zavatra momba izay nanoratra ho ahy: Dia tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasi-behivavy.
7:2 Fa, noho ny fijangajangana, aoka ny lehilahy samy hanana ny vadiny, ary aoka ny vehivavy samy hanana ny vadiny avy.
7:3 Ny lehilahy dia tokony hanatanteraka ny adidiny amin'ny vadiny, ary ny vehivavy koa dia tokony hanao toy izany koa amin'ny vadiny.
7:4 Tsy ny vavy, fa ny lahy, izay manana fahefana ny vatany. Fa, toy izany ihany koa, tsy ny lahy, fa ny vavy, izay manana fahefana amin'ny vatany.
7:5 Noho izany, Tsy maintsy ao amin'ny adidy iray hafa, afa-tsy ny manaiky angamba, mandritra ny fotoana voafetra, mba hahafoana ny tenanareo noho ny vavaka. Ary avy eo, miara-miverina indray, fandrao haka fanahy anareo i Satana amin'ny alalan'ny ny tsy nihinan-kanina.
7:6 Fa izany no nanao hoe:, tsy toy ny po, na ho toy ny didy.
7:7 Fa tiako kokoa izany raha toa ianao no tia ny tenako rehetra. Fa ny olona tsirairay dia manana ny fanomezana avy amin 'Andriamanitra araka ny tokony: iray toy izany, hafa toy izany.
7:8 Fa lazaiko amin'ny tsy manambady sy ny mpitondratena: Tsara ho azy ireo, raha toa izy ireo hijanona ho izy ireo, fotsiny tahaka ny anahafako.
7:9 Fa raha izy ireo tsy afaka mifehy ny tenany, tokony hanambady. Fa aleo manambady, toy izay hodorana.
7:10 Fa ho an'ireo izay efa nandray anjara tamin'ny fanambadiana, dia tsy Izaho no mandidy anao, fa ny Tompo: Ny vavy tsy mba hisaraka amin'ny vadiny.
7:11 Fa raha izy no tafasaraka aminy, izy dia tsy maintsy hitoetra tsy manam-bady, na aoka hody amin'ny lahy. Ary ny lahy aoka tsy hiala amin'ny vavy.
7:12 Ny amin'ny sisa, Miteny aho, fa tsy ny Tompo. Raha misy rahalahy manambady tsy mpino vadiny, dia Nanaiky mba hiara-belona aminy, dia aoka tsy hiala aminy.
7:13 Ary raha misy vehivavy manambady tsy mpino, Ary Nanaiky hiara-hiaina aminy, dia aoka tsy hiala ny vadiny.
7:14 Fa ny lahy tsy mino no nanamasinana antsika tamin'ny vadiny mino, ary ny vavy tsy mino no nanamasinana antsika tamin'ny lehilahy mino. Raha tsy izany, ny zanakao dia ho maloto, kosa fa masina izy ireo.
7:15 Fa raha ny tsy mino miainga, aoka izy hiala. Fa misy rahalahy na anabavy tsy azo atao momba ny fanandevozana toy izany. Fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana.
7:16 Ary ahoana no ahafantaranao, vady, na mety ho voavonjinao ny vadinao? Ary ahoana no ahafantaranao, lehilahy, na mety ho voavonjinao ny vadinao?
7:17 Na izany aza, aoka samy mandeha araka ny Tompo nozaraina ho azy, samy araka Andriamanitra efa niantso azy. Ary dia toy izany no mampianatra ao amin'ny fiangonana rehetra.
7:18 Moa nisy lehilahy nantsoina voafora? Aoka izy tsy rakofany ny voafora. Moa nisy lehilahy tsy voafora nantsoina? Aoka izy tsy hoforana.
7:19 Ny famorana na inona na inona, ary ny tsy voafora na inona na inona; tsy misy afa-tsy ny fitandremana ny didin 'Andriamanitra.
7:20 Aoka ny tsirairay ary samy hitoetra ao amin 'ny antso izay niantsoana.
7:21 Ve ianao ho mpanompo izay nantsoina? Aza momba izany. Fa raha ianao raha efa manana ny fahafahana ho afaka, mampiasa izany ho.
7:22 Fa mpanompo rehetra izay efa voantso ao amin'ny Tompo dia maimaim-poana ao amin'ny Tompo. Toy izany koa, misy olona afaka izay voantso ho mpanompo ao amin'i Kristy.
7:23 Ianao no olom-boavidy. Aza ho vonona ho amin'ny mpanompon'ny olona.
7:24 rahalahy, aoka samy, na inona na inona toetra izy hoe, hitoetra ao amin'ny fanjakana izany amin'Andriamanitra.
7:25 Ankehitriny, ny amin'ny virijina, Dia tsy manana didy avy amin'ny Tompo. Fa omeko torohevitra, toy ny olona efa nahazo ny famindram-pon'ny Tompo, mba ho mahatoky.
7:26 Noho izany, I mihevitra izany ho tsara, noho ny ankehitriny tsy maintsy: fa tsara ho an'ny olona mba ho toy ny ahy.
7:27 Ve ianao Manam-bady? Aza mitady ny ho afaka. Moa ve ianao afaka ataon'ny vehivavy? Aza mitady vady.
7:28 Fa raha ianao haka vady, mbola tsy nanota. Ary raha misy virjiny nikasa hanambady, izy tsy nanota. Na izany aza, toy izany dia hanana ny fahoriana ny nofo. Fa izaho miantra anareo avy izao.
7:29 Ary noho izany, izao no lazaiko, rahalahy: Efa fohy ny andro. Inona sisa tsy lany ka dia toy ny: izay manambady dia tokony ho toy ny raha tàhiny misy izay tsy;
7:30 ary ireo izay mitomany, toy ny tsy mitomany; ary izay mifaly, toy ny raha tsy mifaly; ary ireo izay mividy, toy ny hoe nahazo na inona na inona izy ireo;
7:31 ary ireo izay mampiasa ny zavatr 'izao tontolo izao, toy ny raha tsy nampiasa azy ireo. Fa ny tarehimarika ity mandalo izao fiainana izao.
7:32 Fa tiako kokoa ianao ho tsy misy ahiahy. Na iza na iza dia tsy misy vady no miahiahy momba ny zavatry ny Tompo, ny fomba mba hahafaly an'Andriamanitra.
7:33 Fa na iza na iza no momba vady no miahiahy momba ny zavatr'izao tontolo izao, ny fomba mba hahafaly ny vadiny. Ary noho izany, dia nozarainy.
7:34 Ary ny vehivavy tsy manambady sy ny virjiny mieritreritra momba ny zavatra izay avy tamin'ny Tompo, dia mba ho masina ny tenany sy ny fanahy. Fa izay manam-bady izy mieritreritra momba ny zavatra izay ao amin'izao tontolo izao, ny fomba mba hahafaly ny lahy.
7:35 Koa, Miteny izany aho noho ny tombontsoa manokana, tsy mba hanary ny fandrika anareo, fa na inona na inona dia marina mankany, ary na inona na inona mety hanome anao ny fahafahana ho tsy nisy fanakantsakanana, ka hiankohoka eo anatrehan'ny Tompo.
7:36 Fa raha misy olona toa mihevitra ny tenany ho tsy mendrika, ny zazavavy, izay ny olon-dehibe taona, ary noho izany tokony ho, mba hanao araka izay sitrapony. Ary raha mampakatra azy, tsy hanota.
7:37 Fa raha mafy dia nanapa-kevitra tao am-pony, ary tsy misy adidy, afa-tsy ny herin 'ny safidy malalaka, ary raha efa nitsara izany ao am-pony, dia aoka hitoetra ho virjiny, dia manao tsara.
7:38 Ary noho izany, izay mpikamban'ny amin'ny virijina amin'ny fanambadiana no tsara, ary izay tsy hiaraka taminy no tsara kokoa.
7:39 Ny vehivavy dia voafatotra ambanin'ny lalàna, raha mbola velona ny lahy. Fa raha maty ny vadiny, dia afaka. Mety hanam-bady izy an'izay tiany, fa ao amin'ny Tompo ihany.
7:40 Fa izy ho mora kokoa ny fitahiana, raha mitoetra ao amin'ity fanjakana, araka ny torohevitro. Ary ataoko fa izaho, koa, manana ny Fanahin'Andriamanitra.
8:1 Ary ny amin'ny izay zavatra natao sorona ho an'ny sampy: dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra. Ny fahalalana mampieboebo;, fa ny fitiavana no mampandroso.
8:2 Fa raha misy mihevitra ny tenany ho mahalala na inona na inona, dia mbola tsy mahalala an-dalana izay tokony hahalala.
8:3 Fa raha misy tia an'Andriamanitra, izy dia fantatr'Andriamanitra izy.
8:4 Fa ny amin'ny ny sakafo izay sorona amin'ny sampy, dia fantatsika fa sampy eto amin'izao tontolo izao dia na inona na inona, ary tsy misy Andriamanitra, afa-tsy iray.
8:5 Fa na dia misy zavatra atao hoe andriamanitra, na any an-danitra, na eto an-tany, (Raha misy mihevitra mihitsy aza mba ho andriamanitra maro sy tompo maro)
8:6 nefa fantatsika fa iray ihany Andriamanitra, ny Ray, avy izay ny zavatra rehetra, ary izay isika, ary iray ihany ny Tompo i Jesoa Kristy, izay Aminy no isian'ny zavatra rehetra,, ary iza isika.
8:7 Fa ny fahalalana dia tsy amin'ny olona rehetra. Nandritra ny olona, izao ankehitriny izao ihany, amin'ny fanekena tamin'ny sampy, mihinana ny zavatra efa natao sorona ho an'ny sampy. Ary ny feon'ny fieritreretany, rehefa marary, manjary voaloto.
8:8 Kanefa sakafo Tsy hidera antsika amin'Andriamanitra. Fa raha mihinana, dia tsy manana bebe kokoa, ary raha tsy mihinana, dia tsy latsaka.
8:9 Fa aoka ho tandremo sao aoka ny fahafahanareo ho antony mahatonga ny fahotana ho an'ireo izay malemy.
8:10 Fa raha misy mahita olona amin'ny fahalalana nipetraka hihinana amin'ny fanompoan-tsampy, dia tsy ny feon'ny fieritreretany, rehefa marary, ho sahy hihinana ny zavatra efa natao sorona ho an'ny sampy?
8:11 Ary tokony ho rahalahy marary fatin'ny ny fahalalanao, na dia Kristy maty ho azy?
8:12 Ary rehefa manota toy izany hamely ny rahalahy, ary manimba ny malemy ny feon'ny fieritreretana, dia manota amin'i Kristy.
8:13 Noho io, raha ny hanina mitondra ny rahalahiko ota, Izaho tsy hihinan-kena, fandrao mitarika ny rahalahiko ota.
9:1 Tsy afaka aho? Aho tsy ho Apôstôly? Efa tsy nahita Kristy Jesosy Tompontsika? Ve ianao Tsy asako ao amin'ny Tompo?
9:2 Ary raha toa aho ka tsy ho Apôstôly ny hafa, nefa mbola ho anao aho. Fa ianareo no tombo-kase mah'Apostoly ahy ao amin'ny Tompo.
9:3 Ny fiarovana amin'ireo izay manontany ahy izao:
9:4 Moa ve isika tsy manana ny fahefana hihinana sy hisotro?
9:5 Moa ve isika tsy manana ny fahefana mba handeha manodidina amin'ny vehivavy izay anabavy iray, tahaka ny anaovany ny teny sasany Apôstôly, ary ny rahalahy 'ny Tompo, ary Kefasy?
9:6 Sa kosa ny tenako ihany sy Barnabasy, izay tsy manana ny fahefana hanao zavatra toy izany?
9:7 Iza no mbola nanompo ho miaramila, ary nandoa ny stipend? Iza no mamboly voaloboka ka tsy mihinana ny vokatra avy? Iza no saha fiandrasana ondry aman'osy ka tsy mihinana amin'ny rononony?
9:8 Moa ve aho miteny izany araka ny fanaon'ny olona? Sa tsy ny lalàna mba milaza izany koa?
9:9 Fa voasoratra eo amin'ny lalàn'i Mosesy: "Aza hamatotra ny vavan'ny omby, raha ny manitsaka ny vary. "Andriamanitra eto voakasika miaraka amin'ny omby?
9:10 Sa izany no izy nanao hoe:, tokoa, ho an'ny noho? Izany zavatra izany dia nosoratana manokana ho antsika, satria izay miasa tany dia, dia tokony hiasa amin'ny fanantenana, ary izay am-pamoloana dia, koa, amin'ny fanantenana ny fandraisana ny vokatra.
9:11 Raha izahay namafy zavatry ny fanahy ao aminao, no zava-dehibe raha mijinja amin'ny zavatra eto amin'ity tontolo ity?
9:12 Raha ny hafa dia mpandray anjara amin'ny izany zo izany aminareo, nahoana moa isika no tsy mitondra ny lohateny hoe kokoa? Na izany aza anefa dia tsy nampiasa izany fahefana. Fa tsy, no mitondra ny zavatra rehetra, fandrao isika hanome misy sakana ny Filazantsaran'i Kristy.
9:13 Tsy fantatrareo ve fa ireo izay miasa ao amin'ny fitoerana masina mihinana ny zavatra izay ho an'ny fitoerana masina, ary izay manompo eo amin'ny alitara ihany koa ny mizara amin'ny alitara?
9:14 Noho izany, koa, no nandidian'ny Tompo fa izay mitory ny filazantsara dia hahazo fivelomana amin'ny Filazantsara.
9:15 Nefa tsy nahavatra izany zavatra izany. Ary efa tsy voasoratra mba ireo zavatra ireo mba hatao amiko. Fa tsara ho ahy ny ho faty, fa tsy hamela na iza na iza hanaisotra avy ny voninahitro.
9:16 Fa raha mitory ny filazantsara, dia tsy voninahitra ho ahy. Fa tsy maintsy efa nametraka ahy. Ary ny loza ho ahy, raha tsy mitory ny Filazantsara.
9:17 Fa raha manao izany an-tsitrapo, Mahazo valim-pitia aho. Fa raha manao izany fo izany, ny fotoampitantanana dia omena ho ahy.
9:18 ary inona no, avy eo, ho ny valim-pitia? Noho izany, rehefa nitory ny Filazantsara, Tsy homeko ny Filazantsara nefa tsy mandray, ka mba tsy hanampatra ny fahefako amin'ny Filazantsara.
9:19 Fa fony aho olona afaka rehetra, Dia nanao ny tenako ny ho mpanompo'izy rehetra izy, ka mba hahazoako mainka.
9:20 Ary noho izany, ny Jiosy, Aho, dia tonga toy ny Jiosy, ka mba hahazoako ny Jiosy.
9:21 Ho an'ireo izay manana ny lalàna, Dia tonga toy raha ambanin'ny lalàna, (na dia tsy ambanin'ny lalàna) ka mba hahazoako izay ambanin'ny lalàna. Ho an'ireo izay tsy nanan-dalàna, Dia tonga toy raha izaho no tsy nanan-dalàna, (na dia tsy tsy misy ny lalàn 'Andriamanitra, na dia nanana ny lalàn'i Kristy) ka mba hahazoako ireo izay tsy nanan-dalàna.
9:22 Tamin'ny malemy, Dia tonga malemy, koa aho, mba hahazoako ny malemy. Ho an'ny rehetra, Lasa rehetra, ka mba hahazoako hamonjy rehetra.
9:23 Ary manao ny zavatra rehetra noho ny amin'ny Filazantsara, ka mba ho ny mpiara-miasa.
9:24 Tsy fantatrareo va fa, izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana, rehetra, Azo antoka fa, dia mpihazakazaka, fa iray ihany no hanatanterahany ny loka. Toy izany koa, tsy maintsy mihazakazaka, mba hanatratrarana.
9:25 Ary ny anankiray, izay mifaninana amin'ny fifaninanana hijanona tsy ny zava-drehetra. Ary izy ireo manao izany, mazava ho azy, mba hahatratra ny lò satro-boninahitra. Fa manao izany, ka mba hahatratra izay tsy mety levona.
9:26 Ary noho izany dia mihazakazaka, fa tsy amin'ny fisalasalana. Ary noho izany dia niady, fa tsy amin'ny flailing eny amin'ny rivotra.
9:27 Fa tsy, I hamaizako ny tena, mba hamerina azy hiakatra ho any fanandevozana. Raha tsy izany, Mba hitoriako amin'ny hafa, Aoka kosa ianareo ho ny tenako Ilay noroahina.
10:1 Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo, rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra dia nita ny ranomasina.
10:2 Ary Mosesy, izy rehetra dia natao batisa, tao amin'ny rahona sy any an-dranomasina.
10:3 Dia nihinana izy rehetra ihany ny sakafo ara-panahy.
10:4 Ary izy rehetra nisotro tamin'ny zava-pisotro ara-panahy iray ihany. Ary noho izany, izy rehetra dia nisotro tamin'ny vatolampy ara-panahy mikatsaka ny hahazo azy ireo; ary Kristy izany vatolampy izany.
10:5 Nefa ny ankabiazany dia, Andriamanitra tsy tsara sitrak'Andriamanitra. Fa izy ireo namely any an-efitra.
10:6 Ary izany zavatra izany dia natao ho toy ny ohatra ho antsika, ka dia mba tsy maniry zava-dratsy, toy ny te.
10:7 Ary noho izany, Tsy handray anjara amin'ny fanompoan-tsampy, tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra: "Ny olona nipetraka hihinana sy hisotro, ary avy eo dia nitsangana voly ny tenany. "
10:8 Ary aoka isika tsy hijangajanga, tahaka ny sasany tamin'ireny fornicated, ary toy izany koa telo arivo amby roa-dia voafafy teny amin'ny indray andro.
10:9 Ary aoka tsy haka fanahy ny Tompo, tahaka ny sasany tamin'ireny halaim-panahy, koa araka izany ny matin'ny menarana.
10:10 Ary tsy tokony mimonomonona, toy ny sasany tamin'ireny izay nimenomenona, koa araka izany ny matin'ny mpandringana.
10:11 Ary rehetra izany dia nanjo azy ireo ho ohatra, koa araka izany ny efa nosoratana ho fanitsiana, satria ny taona farany efa latsaka aminay.
10:12 Ary noho izany, izay mihevitra ny tenany ho mijoro, aoka izy hitandrina mba tsy ho lavo.
10:13 Fakam-panahy dia tsy tokony hahazo anareo, afa-tsy izay olombelona. Fa mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho ny ho ny fahaizanao. Fa tsy, dia nanatanteraka ny Providence, na dia nandritra ny fakam-panahy, mba ho afaka ny hahazaka izany.
10:14 Noho io, malala indrindra avy amin'ny Ahy, handositra ny fanompoam-pivavahana ny sampy.
10:15 Koa satria aho miresaka amin'ny olona izay manan-tsaina, hitsara izay lazaiko ho anareo.
10:16 Ny kapoaky ny tso-drano izay isaorantsika, moa tsy firaisana amin'ny ran'ny Kristy? Ary ny mofo izay vakintsika,, dia tsy firaisana ao amin'ny Tenan'i ny Tompo?
10:17 Amin'ny alalan'ny mofo iray, isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany: antsika rehetra izay tonga mpiray amin'ny mofo iray.
10:18 Diniho ny Isiraely, araka ny nofo. Tsy ireo izay mihinana ny fanatitra tsy mpiombona avy ny alitara?
10:19 Inona no atao hoe manaraka? Tokony lazaiko fa izay sorona amin'ny sampy dia na inona na inona? Na ny sampy dia na inona na inona?
10:20 Fa ny zavatra jentilisa immolate, izy ireo immolate amin'ny demonia, fa tsy amin'Andriamanitra. Ary tsy tiako anao ho tonga mpiray amin'ny demony.
10:21 Tsy afaka ny hisotro amin'ny kapoaky ny Tompo, sy ny kapoaky ny demonia. Tsy afaka ny ho mpandray anjara amin 'ny latabatry ny Tompo, sy mpandray anjara amin 'ny latabatry ny demonia.
10:22 Sa tokony nampahatezitra an'i Jehovah,-piaro? Moa ve isika mahery noho izy? Ny amin'izany dia mety ny amiko, fa tsy ny rehetra no mahasoa.
10:23 Ny amin'izany dia mety ny amiko, fa tsy ny rehetra no fampandrosoana.
10:24 Aoka tsy hisy olona hitady ho an'ny tenany, fa ho an'ny hafa.
10:25 Na inona na inona amidy ao an-tsena, no ho fihinanareo, tsy misy fametrahana fanontaniana noho ny fieritreretana.
10:26 "Ny tany sy izay rehetra eo aminy rehetra an'ny Tompo."
10:27 Raha misy tsy mpino manasa ny, ary ianareo dia vonona ny handeha, dia mety hano izay arosony eo anoloanareo, tsy misy fametrahana fanontaniana noho ny fieritreretana.
10:28 Fa raha misy milaza, "Izany no natao sorona ho an'ny sampy,"Aza mihinana azy, noho ny amin'ny olona iray izay nolazaiko taminareo, ary noho ny fieritreretana.
10:29 Fa aho manondro ny feon'ny fieritreretan'ny olona ny hafa, tsy anao. Fa nahoana ny fahafahako no tsarain'ny feon'ny fieritreretan'ny olon-kafa ny?
10:30 Raha mandray amin'ny fisaorana, nahoana no ho manendrikendrika ny amin'izay anaovako fisaorana?
10:31 Noho izany, na mihinana na misotro, na na inona na inona hafa azonao atao, manao ny zavatra rehetra ho voninahitr'Andriamanitra.
10:32 Aoka tsy hanan-tsiny amin'ny Jiosy, ary ny eo amin'ny hafa firenena, ary ny eo amin'ny Fiangonana 'Andriamanitra,
10:33 tahaka ahy koa, amin'ny zava-drehetra, azafady rehetra, tsy mitady izay tsara indrindra ho ahy, fa izay tsara indrindra ho maro hafa, mba ho voavonjy.
11:1 Aoka hanahaka ahy, tahaka ny anahafako an'i Kristy.
11:2 Ary midera anareo aho, rahalahy, satria mahatsiaro ahy amin'ny zava-drehetra, amin'ny fomba toy ny mihazona ny didinao aho araka izay efa nanolotra anareo ho any amin'ny.
11:3 Ary tiako ho fantatrareo fa ny lohan'ny lehilahy rehetra no Kristy. Fa ny lohan'ny vehivavy ny olona. Na izany aza tena, ny lohan'i Kristy no Andriamanitra.
11:4 Ny lehilahy rehetra, raha mivavaka na maminany nisaron-doha disgraces ny lohany.
11:5 Fa ny vehivavy rehetra mivavaka na maminany amin'ny lohany disgraces tsy misaron-doha. Fa dia iray ihany izany toy ny voaharatra ny lohany.
11:6 Raha ny vehivavy tsy miafina, aoka ny volony ho ringana. marina tokoa fa avy eo, raha izany dia fahafaham-baraka ny vehivavy ny manambady azy volo tapaka, na ny manana-doha voaharatra, Avy eo dia tokony misaron-doha.
11:7 tokoa, misy olona tokony tsy misaron-doha, satria izy no endrika sy voninahitr'Andriamanitra. Fa ny vehivavy kosa no voninahitry ny lehilahy.
11:8 Ny lehilahy mantsy tsy avy vehivavy, fa ny vehivavy no olona.
11:9 ary tokoa, Tsy ny olona no natao ho an'ny vehivavy, fa ny vehivavy no noforonina ho an'ny olona.
11:10 Noho izany, vehivavy tokony hanana mariky ny fahefana eo amin'ny lohany, noho ny amin'ny anjely.
11:11 Na izany aza tena, ny olona dia tsy misy tsy misy vehivavy, ary tsy ho vehivavy misy tsy misy olona, ao amin'ny Tompo.
11:12 Fa toy ny vehivavy niforona avy ny olona, dia toy izany koa no misy ny alalan 'ny lehilahy ny vehivavy. Fa ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra.
11:13 Judge ho anareo. Mety ve ny vehivavy ny mivavaka amin'Andriamanitra tsy misaron-doha?
11:14 Tsy izao fomban'ny hampianatra anareo ny tenany fa, tokoa, Raha misy olona mitombo ny volony lava, dia fahafaham-baraka ho azy?
11:15 Na izany aza tena, raha misy vehivavy mitombo ny volo lava, dia voninahitra ho azy, Fa ny volony no nomena azy ho fisaronana.
11:16 Fa raha misy manana saina tia ady, isika dia tsy manana izany fanao izany, sady tsy ny Fiangonan'Andriamanitra.
11:17 Mampitandrina anao aho izao, tsy midera, momba izany: mba hiara-mivory, fa tsy tsara kokoa, fa ny ratsy.
11:18 Voalohany indrindra, tokoa, Dia reko fa rehefa miara-hivory ao am-piangonana, ho fisaraham-bazana misy eo aminareo. Ary mino aho fa izany, ampahany.
11:19 Fa tsy maintsy misy fitokoana, ka dia ireo izay efa notsapaina mba haseho eo aminareo.
11:20 Ary noho izany, rehefa miara-mivory ho iray, dia tsy mba hihinana ny Fanasan'ny Tompo akory.
11:21 Fa samy voalohany homana ny sakafony avy hihinana. Ary vokatr'izany, iray ny olona noana, raha mbola anankiray kosa mamo.
11:22 Sa tsy manan-trano, izay hihinana sy hisotro? Sa ve ianao toy izany ho tsinontsinona ny fiangonan 'Andriamanitra fa ho raiki-tahotra ireo izay tsy manana izany fanamavoana? Inona no tokony lazaiko aminareo? Tokony ho hidera Anao? Aho tsy midera anareo tahaka izao.
11:23 Fa izaho efa nandray tamin'ny Tompo izay efa natolotro anareo: fa Jesosy Tompo, amin'ny alina iny izay natolotra, dia nandray mofo,
11:24 sy nisaotra, dia novakiny, ka nanao hoe:: "Raiso, ka hano. Ity no tenako, izay homena ho anareo. Izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. "
11:25 Toy izany koa, ny kapoaka, rehefa avy nihinana sakafo hariva, nanao hoe:: "Ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako. manao izany, na oviana na oviana no misotro ianareo, ho fahatsiarovana ahy. "
11:26 Fa na oviana na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo, mandra-hiverina.
11:27 Ary noho izany, na zovy na zovy mihinana ity mofo ity, na zava-pisotro avy amin'ny kapoaky ny Tompo, amin'ny fanahy tsy mendrika, dia ho mendrika ny amin'ny tena sy ny ran'ny Tompo izy.
11:28 Fa aoka ny olona hamantatra ny tenany, ary, amin'izao fomba izao, aoka izy hihinana amin'ny mofo, sy misotro amin'ny kapoaka izay.
11:29 Fa izay rehetra mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika, mihinana sy misotro ny didim-pitsarana hanohitra ny tenany, raha tsy mamantatra izany mba ho ny tena 'ny Tompo.
11:30 Vokatr'izany, maro malemy sy marary eo anivonareo, ary maro no efa nodi-mandry.
11:31 Fa raha ny tenantsika isika dia mamantatra, dia azo antoka isika, dia tsy mba hotsaraina.
11:32 Nefa rehefa tsaraina, isika rehefa ahitsy 'ny Tompo, ka mba tsy hohelohina miaraka amin'izao tontolo izao.
11:33 Ary noho izany, ry rahalahy, rehefa hiara-mivory mba hihinana, hihaino tsara ny iray hafa.
11:34 Raha misy olona noana, aoka izy hihinana no an-tranony, mba tsy hiara-mivory amin'ny fitsarana. Ary ny sisa, Izaho no handaharany ireo rehefa tonga aho.
12:1 Ary ny amin'ny zavatra ara-panahy, Tsy tiako tsy ho fantatrareo, rahalahy.
12:2 Fantatrareo fa fony jentilisa ianao, nanatona sampy moana ianao, manao izay no nitarika ny hanao.
12:3 Noho io, Tiako ho fantatrareo fa tsy misy olona miteny ao amin'ny Fanahy 'Andriamanitra nanononan'i ozona an'i Jesosy. Ary tsy misy mahay hoe: Jesosy no Tompo, afa-tsy ao amin'ny Fanahy Masina.
12:4 Marina tokoa, misy fahasoavana hafa, fa ny Fanahy dia iray ihany.
12:5 Ary misy fanompoana maro samihafa, fa ny Tompo dia iray ihany.
12:6 Ary misy asa hafa, fa Andriamanitra dia iray ihany, Izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra.
12:7 Na izany aza, ny fampisehoana ny Fanahy dia omena ny tsirairay amin'ny zava-mahasoa.
12:8 tokoa, ho iray, ny alalan 'ny Fanahy, dia nomena teny fahendrena; fa ny anankiray, araka izany Fanahy izany ihany, tenim-pahalalana;
12:9 ny anankiray, ao amin'ny Fanahy iray ihany, finoana; ny anankiray, ao amin'ny Fanahy iray, ny fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana;
12:10 ny anankiray, asa mahagaga; ny anankiray, faminaniana; ny anankiray, ny fahaiza-manavaka ny fanahy; ny anankiray, samy hafa ny fiteny; ny anankiray, ny fandikana ny teny.
12:11 Fa ny iray ary ny Fanahy dia iray ihany izany rehetra izany no, mizara ny olona rehetra araka ny sitrapony.
12:12 Fa tahaka ny tena iray ihany, nefa maro faritra, toy izany avokoa ny momba ny tena, na dia maro, dia tena iray ihany. Dia toy izany koa Kristy.
12:13 ary tokoa, Fanahy iray, isika rehetra dia natao batisa ho tena iray, na Jiosy na hafa firenena, na andevo na tsy andevo. Ary izahay rehetra nisotro tao amin'ny Fanahy iray.
12:14 Fa ny tena, koa, dia tsy anjara iray, fa maro.
12:15 Raha ny tongotra dia ny hoe:, "Satria tsy tanana aho, Dia tsy mba momba ny tena,"Ve dia tsy momba ny tena?
12:16 Ary raha ny sofina dia ny hoe, "Satria izaho no ilay maso, Dia tsy mba momba ny tena,"Ve dia tsy momba ny tena?
12:17 Raha avokoa ny tena rehetra ny maso, ahoana no mbola mihaino? Raha fandrenesana avokoa, ahoana no manimbolo?
12:18 Fa raha tokony, Andriamanitra efa nametraka izay faritra, tsirairay amin'izy ireo, eo amin'ny tena, araka izay tiany.
12:19 Ary raha izay rehetra anjara iray ihany, ahoana no ho tena?
12:20 Fa raha tokony, Fa maro ny momba, tokoa, nefa vatana iray ihany.
12:21 Ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana, "Izaho tsy mila ny asanao." Ary koa, ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra, "Ianareo tsy mahasoa ahy."
12:22 Raha ny tena izy, ka mainka ilaina ireo ny momba ny tena izay heverina ho malemy kokoa.
12:23 Ary na mandinika sasany momba ny tena ho kely tsara, dia manodidina ireo be voninahitra bebe kokoa, ary noho izany, ireo faritra izay tsy hilamina farany be kokoa ny amin'ny fanajana.
12:24 Na izany aza, hilamina ny faritra tsy misy toy izany mila, satria Andriamanitra mora tezitra ny tena, nizara ny voninahitra bebe kokoa izay manana ny ilaina,
12:25 mba tsy hisy fisarahana mety eo amin'ny tena, fa ny tenany kosa ny faritra mba hikarakara ny hafa.
12:26 Ary noho izany, raha mijaly ny anankiray amin'ny momba na inona na inona, ny faritra rehetra mijaly aminy. Na, Raha misy mahita voninahitra anjara, ny faritra rehetra miara-mifaly aminy.
12:27 Ary ianareo no tenan'i Kristy, ary ny faritra toy anjara.
12:28 ary tokoa, Andriamanitra efa nametraka lamina iray ao amin'ny Fiangonana: Apôstôly voalohany, faharoa Mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka fahagagana-miasa, ary avy eo dia ny fahasoavan'ny fanasitranana, ny manampy ny olona, ny Filan-kevi-, ny samy hafa fiteny, ary ny heviny ny teny.
12:29 Apostoly va izy rehetra? Izy rehetra Mpaminany? Izy rehetra mpampianatra?
12:30 Izy rehetra mpanao fahagagana? Ve ny fahasoavana rehetra, ny fanasitranana? Ataovy izay rehetra miteny amin'ny fiteny tsy fantatra? Aza mandika teny rehetra?
12:31 Fa aoka ho be zotom-po ho tsara kokoa ny fanomezam-pahasoavana. Ary ambarako aminao ny mbola lalana tsara indrindra.
13:1 Raha izaho no mba miteny amin'ny fiteny ny olona, na ny anjely, nefa tsy manana fiantrana, Aho, dia ho toy ny clanging lakolosy na novakivakin'ny kipantsona.
13:2 Ary raha manana faminaniana, sy mianatra zava-miafina rehetra, ary hahazo fahalalana rehetra, ary handova ny finoana rehetra, mba hahafahako mihetsika tendrombohitra, nefa tsy manana fiantrana, dia amin'izay aho no na inona na inona.
13:3 Ary raha mizara ny fananako rehetra mba hohanin'ny malahelo, ary na dia manolotra ny tenako mba hodorana, nefa tsy manana fiantrana, dia manome ahy na inona na inona.
13:4 Ny fitiavana mahari-po, tsara fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy manao diso, tsy inflated.
13:5 Ny fiantrana dia tsy fatra-paniry laza, tsy mitady ho azy, tsy nahatezitra, Mihevi tsy ratsy.
13:6 Ny fiantrana tsy mifaly amin'ny ratsy, fa mifaly amin'ny marina.
13:7 Charity mijaly rehetra, mino rehetra, manantena ny rehetra, miaritra ny.
13:8 Ny fiantrana dia tsy hesorina, na dia levona faminaniana, na ny fiteny hitsahatra, na ny fahalalana dia rava.
13:9 Fa fantatsika afa-tsy ampahany, ary ny faminaniantsika afa-tsy ampahany.
13:10 Fa rehefa tonga ny tanteraka, ny tsy mandalo.
13:11 Fony aho mbola zaza, Dia niteny toy ny zaza, Nihevitra toy ny zaza, Nihevitra aho toy ny zaza. Fa rehefa lasa ny lehilahy, Napetrako manokana ny zavatra ny ankizy.
13:12 Ankehitriny isika mizaha ao amin'ny fitaratra mahita marina. Fa avy eo isika, dia hahita mifanatrika. Ankehitriny sombintsombiny no fantatro, fa dia ho fantatrareo, tahaka Ahy fantatra.
13:13 Fa amin'izao fotoana izao, ireto telo ireto foana: finoana, manantena, ary ny fiantrana. Ary ny lehibe indrindra amin'ireo dia ny fitiavana.
14:1 Miezaha mitady ny fitiavana. Aoka ianao ho be zotom-po ho an'ny zavatra ara-panahy, fa izany ihany fa ny haminany.
14:2 Fa na iza na iza miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, fa tsy ho an'olona miteny, fa ho an'Andriamanitra. Fa tsy misy olona mahalala. Kanefa amin'ny alalan'ny Fanahy, dia miteny zava-miafina.
14:3 Fa na iza na iza maminany miteny amin'olona ho fampandrosoana sy ho famporisihana ary ny fampiononana.
14:4 Na iza na iza miteny amin'ny fiteny tsy fantatra Manazava ny tenany. Fa na iza na iza maminany Manazava ny Fiangonana.
14:5 Ankehitriny dia tiako ianareo rehetra mba hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, fa mihoatra noho izany ny haminany. Fa izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, angamba izy raha tsy mandika, mba hahazoan'ny fiangonana fampandrosoana.
14:6 Fa ankehitriny, rahalahy, raha izaho no ho avy any aminareo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ahoana no handray soa ianao, fa raha tsy miteny aminareo amin'ny fanambarana, na amin'ny fahalalana, na ao amin'ny faminaniana, na ao amin'ny Fotopampianarana?
14:7 Na dia ireo zavatra izay tsy misy fanahy dia afaka manao feo, na dia rivotra na lokanga. Fa raha tsy manolotra ny fanavahana ao anatin'ny feo, ahoana no ho fantatra izay avy amin'ny sodina, ary izay avy amin'ny kofehy?
14:8 Ohatra, raha ny anjomara nanao feo hafahafa, iza no hiomana hiady?
14:9 Koa ny eo aminareo koa, Fa raha tsy mahalaza ny lelany amin'ny teny tsotra, ahoana no ho fantatra izay lazain'ny? Fa amin'izany dia ho hiteny amin'ny rivotra.
14:10 Diniho fa misy maro samy hafa ny fiteny eto amin'ity tontolo ity, nefa tsy misy dia tsy misy feo.
14:11 Noho izany, raha tsy mahalala ny toetry ny feo, dia ho toy ny vahiny ho an'ny olona izay miteny aho; ary izay miteny ho toy ny vahiny ho ahy.
14:12 Koa ny eo aminareo koa. Ary ianao satria be zotom-po ny zavatra ara-panahy, mitady ny fampandrosoana ny Fiangonana, mba hitombo.
14:13 Izany no antony, koa, na iza na iza miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, aoka izy hivavaka ho ny hevitry ny nofy.
14:14 Noho izany, raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra, ny fanahiko mivavaka, fa ny saina dia tsy misy voankazo.
14:15 Inona no atao hoe manaraka? Aho dia tokony hivavaka am-panahy, ary koa mivavaka amin'ny saina. Aho fa tokony hankalaza ny Fanahy, ary koa tsianjery salamo ny saina.
14:16 Raha tsy izany, raha efa nitso-drano ihany ny fanahy, ahoana no olona, in 'ny toetry ny tsy fahalalana, hametraka ny "Amen" ny tso-drano? Fa tsy fantany izay lazainao.
14:17 Raha izany dia, Azo antoka fa, misaotra anao koa, fa ny hafa kosa tsy mba ampandrosoina.
14:18 Misaotra an'Andriamanitro izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra noho ny aminareo rehetra.
14:19 Fa ato am-piangonana, Aleoko manao teny dimy avy ny saiko, ka dia mba hampianarako ny sasany koa, fa tsy teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra.
14:20 rahalahy, tsy misafidy ny hanana ny sain'ny ankizy. Fa tsy, ho afaka lolompo toy ny zaza, fa ho matotra ao an-tsainareo.
14:21 Voasoratra ao amin'ny lalàna: "Izaho no hitenenany amin'ity firenena ity amin'ny hafa fiteny sy amin'ny molotry, ary dia toy izany koa, dia tsy hihaino ahy, hoy Jehovah. "
14:22 Ary noho izany, fiteny tsy fantatra dia famantarana, tsy ho an'ny mpino, fa ho an'ny tsy mpino; ary ny faminaniana dia tsy ho an'ny tsy mpino, fa ho an'ny mpino.
14:23 Koa raha, ny Fiangonana iray manontolo dia mba hanangona ho iray, Ary raha ny rehetra no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary avy eo dia tsy mahalala na ny tsy mino olona dia ny hiditra, Moa tsy milaza fa efa natao very saina?
14:24 Fa raha maminany rehetra, ary ny olona iray izay tsy mahalala na ny tsy mino miditra, izy, dia azo resy lahatra ny rehetra, satria mahalala; dia rehetra.
14:25 Ny zavatra takona ao am-pony, dia voaseho. Ary noho izany, lavo ny tavany, izy no mankafy Andriamanitra, manambara fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa.
14:26 Inona no atao hoe manaraka, rahalahy? Rehefa hanangona, samy mba manana salamo, na fotopampianarana, na ny fanambarana, na ny fiteny, na manana fandikan-teny, fa aoka ny zava-drehetra hatao ho fampandrosoana.
14:27 Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, aoka misy afa-tsy roa, na telo raha be indrindra, ary avy eo kosa, ary aoka olona hahay mandika teny koa.
14:28 Fa raha tsy misy mahalaza ny heviny, dia tokony hangina ao amin'ny fiangonana, dia mba miteny rehefa izy irery amin'Andriamanitra.
14:29 Ary aoka ny mpaminany hiteny, roa na telo, fa aoka ny hafa hamantatra.
14:30 fa avy eo, raha toa zavatra hafa no nambara izay mipetraka, aoka ny voalohany ho mangina.
14:31 Fa hianareo rehetra dia afaka haminany iray isaky ny mandeha, mba hahazoanareo mianatra rehetra sy izay rehetra mety ho ampirisihina.
14:32 Fa ny fanahin'ny mpaminany dia manaiky hozakain'izy mpaminany.
14:33 Ary Andriamanitra dia tsy ny fifanarahana, fa tompon'ny fiadanana, tahaka ahy koa hampianatra ny fiangonana rehetra any amin'ny olona masina.
14:34 Ny vehivavy dia tokony hangina ao amin'ny fiangonana. Fa tsy avela hiteny ho azy ireo; fa raha tokony, tokony ho ambany, araka ny lazain'ny lalàna koa.
14:35 Ary raha te-hianatra na inona na inona, aoka izy hanontany ny lahy raha mby any an-trano. Fa mahamenatra ny vehivavy ny miteny ao am-piangonana.
14:36 Koa ankehitriny, no Tenin'Andriamanitra mivoaka avy aminao? Sa nisy naniraka tany aminao irery?
14:37 Raha misy toa ho mpaminany, na olona araka ny fanahy, dia tokony hahafantatra izany zavatra izany, izay soratako ho aminareo, fa izany zavatra izany no didin 'ny Tompo.
14:38 Raha misy tsy manaiky ireo zavatra ireo, dia tsy tokony ho ekena.
14:39 Ary noho izany, rahalahy, ho be zotom-po ny haminany, ary aza mandrara miteny amin'ny fiteny tsy fantatra.
14:40 Fa aza avela ny zava-drehetra hatao amim-panajana sy ho araka ny tokony mba.
15:1 Ary noho izany dia ampahafantariko anareo, rahalahy, ny filazantsara izay notoriko taminareo, izay ihany koa nandray, ary izay mitsangana.
15:2 By ny Filazantsara, koa, ho voavonjy ianao, raha mihazona ny fahatakarana fa notoriko taminareo, fandrao mino foana.
15:3 Fa natolotro anareo, voalohany indrindra, izay noraisiko: dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika, araka ny Soratra Masina;
15:4 ary dia nalevina; ary natsangana tamin'ny andro fahatelo, araka ny Soratra Masina;
15:5 ary Izy niseho ny Kefasy, ary rehefa afaka izany, tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy.
15:6 Avy eo dia niseho ny tsy omby dimam-jato rahalahy nisy fotoana, maro izay mbola, hatramin'ny 'izao fotoana izao, na dia ny sasany efa nodi-mandry.
15:7 Manaraka, dia niseho tamin'i Jakoba, dia rehetra ny Apostoly.
15:8 Ary faran'izy rehetra, Izy niseho koa aho, toy ny olona teraka aho, dia amin'ny fotoana tsy.
15:9 Fa izaho dia ambany indrindra amin'ny Apôstôly. Ka izaho tsy miendrika hatao hoe Apostoly, satria efa nanenjika ny fiangonan 'Andriamanitra.
15:10 Fa, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, Izaho no nahatoy izao ahy. Ary ny fitia ahy dia tsy foana tsy mitondra fanatitra, nefa Izaho efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra. Nefa tsy izaho, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ato anatiko.
15:11 Fa na dia izaho na ry zareo: araka izany no fitorinay, ary efa nino.
15:12 Ary raha Kristy no torina, natsangana tamin'ny maty, nahoana no ny sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganan'ny maty ho velona?
15:13 Fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty ho velona, avy eo nitsangan-ko velona i Kristy dia tsy.
15:14 Ary raha tsy nitsangan-ko velona i Kristy dia, dia tsy misy ilàna azy ny toriteninay, ary koa ny finoanareo tsy misy ilàna azy.
15:15 Avy eo, koa, isika dia ho hita fa vavolombelona mandainga ny amin'Andriamanitra, satria dia ho nanome vavolombelona hiampanga Andriamanitra, nilaza fa efa nanangana an'i Kristy, rehefa tsy nanaitra azy io, raha, tokoa, ny maty kosa tsy ho tafarina intsony.
15:16 Fa raha ny maty tsy ho tafarina intsony, na i Kristy aza dia nitsangana indray.
15:17 Fa raha tsy nitsangan-ko velona i Kristy dia, avy eo dia foana ny finoanareo; fa ianao dia mbola ho amin'ny fahotanareo.
15:18 Avy eo, koa, ireo izay efa nodimandry ao amin'i Kristy dia ho maty.
15:19 Raha no anantenantsika an 'i Kristy ho amin'ity fiainana ity ihany no, Avy eo isika fadiranovana kokoa noho ny olon-drehetra.
15:20 Fa ankehitriny Kristy efa nitsangana indray tamin'ny maty, tahaka ny voaloham-bokatry ireo izay matory.
15:21 Fa tokoa, fahafatesana dia tonga tamin'ny alalan'ny lehilahy iray. Ary noho izany, ny fitsanganan'ny maty dia tonga tamin'ny alalan'ny lehilahy iray
15:22 Ary toy ny ao amin'i Adama rehetra ho faty, toy izany koa ao amin'i Kristy ny rehetra ho entina ho amin'ny fiainana,
15:23 fa samy amin'ny filaharany tokony: Kristy, tahaka ny voaloham-bokatra, ary manaraka, ireo izay avy amin 'i Kristy, izay nino ny fiavian'ny.
15:24 Rehefa afaka izany, dia ny farany, rehefa izy no efa natolotra ny fanjakana ho an'Andriamanitra Ray, rehefa ho efa foana ny fanapahana rehetra, sy ny fahefana, sy ny hery.
15:25 Fa tsy maintsy ho azy nanjaka, mandra efa nanendry ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony.
15:26 Farany, ny fahavalo atao hoe fahafatesana dia ho ringana. Fa efa nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Ary na dia hoy,
15:27 "Ny zavatra rehetra no nampanekena Azy,"Tsy misy isalasalana fa tsy ahitana ny iray izay nampanaiky ny zavatra rehetra ho Azy.
15:28 Ary raha ny zava-drehetra dia efa nampanekena Azy ny, Ary na dia ny Zanaka mihitsy no hiharan'ny Ilay nampanaiky ny zavatra rehetra Azy, ka dia Andriamanitra mba ho zavatra rehetra amin'izy rehetra.
15:29 Raha tsy izany, inona no ireo izay natao batisa ho an'ny maty ve, raha ny maty tsy ho tafarina intsony mihitsy? Koa nahoana izy ireo no atao batisa ho azy ireo?
15:30 Nahoana koa isika no miaritra fitsapana isan-ora?
15:31 Daily tsy mbola maty aho, amin'ny alalan'ny ny fireharehanareo, rahalahy: ianareo izay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika.
15:32 Raha, araka ny fanaon'ny olona, No niadiako tamin'ny bibi-dia tany Efesosy ny, ahoana izany soa ahy, raha ny maty tsy ho tafarina intsony? "Aoka isika hihinana sy hisotro, fa rahampitso dia ho faty. "
15:33 Moa ve tsy ho voafitaka. Fifandraisana ratsy manimba ny fitondran-tena tsara.
15:34 Aoka ianao ho mailo, ianao fotsiny ireo, ary aza vonona ny hanota. Fa ny olona sasany dia manana ny tsi-fahalalana an'Andriamanitra. No lazaiko aminareo tamim-panajana.
15:35 Fa ny olona iray dia mety hilaza, "Ahoana no hitsangana ny maty?"na, "Inona no karazana vatana no dia miverina amin'ny?"
15:36 hadalana! Izay afafinao tsy azo entina indray ho amin'ny fiainana, , raha tsy maty aloha.
15:37 Ary izay mamafy dia tsy dia ny tenany izay ho amin'ny ho avy, fa ny mangadihady voa, toy ny vary, na voa hafa.
15:38 Fa Andriamanitra manome azy tena araka ny sitrapony, ary araka ny voa tsirairay ny vatana tsara.
15:39 Tsy ny nofo rehetra dia tsy miova nofo. Fa iray ihany no olona tokoa, tena hafa dia ny biby, iray hafa dia ny vorona, fa ny anankiray kosa ny trondro.
15:40 koa, misy any an-danitra sy ny etỳ an-tany vatana. Fa raha ny iray, Azo antoka fa, manana ny voninahitry ny any an-danitra, ny hafa dia manana ny voninahitry ny eto an-tany.
15:41 Ny iray manana ny famirapiratry ny masoandro, iray hafa ny famirapiratry ny volana, ary ny iray ny famirapiratry ny kintana. Fa na dia ny kintana anankiray dia hafa kintana tamin'ny fangarangarany.
15:42 Dia toy izany koa ny fitsanganan'ny maty. Inona no afafy amin'ny kolikoly dia hitsangana amin'ny tsi-fahalòvana.
15:43 Inona no afafy amin'ny fahafaham-boninahitra hitsangana ka ho amin'ny voninahitra. Inona no afafy amin'ny fahalemena hitsangana amin'ny fitondrana.
15:44 Inona no afafy amin'ny biby vatana dia hitsangana amin'ny vatana ara-panahy. Raha misy biby vatana, dia misy koa ara-panahy.
15:45 Toy ny voasoratra fa ilay lehilahy voalohany, Adam, natao tamin'ny manan'aina, dia toy izany no hatao Adama farany tamin'ny fanahy nitondra valiny ho amin'ny fiainana.
15:46 Koa inona no, amin'ny voalohany, tsy ara-panahy, fa ny biby, Lasa manaraka ara-panahy.
15:47 Ny lehilahy voalohany, ho eto an-tany, dia eto an-tany; ny olona faharoa, ho any an-danitra, dia ho any an-danitra.
15:48 Izay zavatra tahaka ny tany dia eto an-tany; ary izay zavatra dia toy ny lanitra dia any an-danitra.
15:49 Ary noho izany, Tahaka ny nitondra ny endriky ny zavatra eto an-tany, dia aoka isika koa dia mitondra ny endriky ny zavatra any an-danitra.
15:50 Ankehitriny dia lazaiko izao, rahalahy, satria nofo aman-drà tsy mahazo handova ny fanjakan 'Andriamanitra; Ary tsy izay ratsy manana izay incorrupt.
15:51 Indro, Lazaiko aminareo ny zava-miafina. tokoa, isika rehetra dia samy hitsangana indray, fa tsy ny rehetra isika, dia ho voaova:
15:52 amin'ny indray mipi-maso, ao amin'ny indray mipi-maso, maneno ny trompetra farany. Fa hotsofina ny trompetra, ary ny maty hitsangana, tsy mety lo. Ary izahay, mba miova.
15:53 Dia toy izany no, dia ilaina ho amin'izany corruptibility mba hitafy tsi-fahafatesana, ary noho izany fiainana an-tany mba hitafy ny tsy fahafatesana.
15:54 Ary rehefa fiainana an-tany ity dia mitafy ny tsy fahafatesana, Ary ny teny izay voasoratra dia hitranga: "Ny fahafatesana noresena ka amin'ny fandresena."
15:55 "Ry fahafatesana ô, aiza ny fandresenao? ry fahafatesana ô, aiza ny fanindronanao?"
15:56 Ary ny fanindronan 'ny fahafatesana dia ny ota, ary ny herin'ny ota dia ny lalàna.
15:57 Fa isaorana anie Andriamanitra, Izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika.
15:58 Ary noho izany, ry rahalahy malalako, ho mafy orina sy Finoantsika, be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa ny asa tsy misy ilàna azy ao amin'ny Tompo.
16:1 Ary ny amin'ny famoriam-bola izay natao ho an'ny olona masina: toy ny fandaharana ho an'ny fiangonana any Galatia, toy izany koa no tokony hatao aminao.
16:2 Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, ny Sabata, dia aoka ny tsirairay avy aminareo maka ny azy ihany, fanokanana inona no hahazoana sitraka aminy, ka rehefa tonga aho, ny rakitra dia tsy voatery ho avy eo.
16:3 Ary rehefa eo aho, na zovy na zovy ianao izay sitrakareo amin'ny alalan'ny taratasy, ireo hanirahako hitondra ny fanomezanareo ho any Jerosalema.
16:4 Ary raha mety ho ahy ny handeha koa, dia hiaraka amiko.
16:5 Ankehitriny dia hamangy anareo Aho rehefa izay no lasa namaky an'i Makedonia. Fa handeha hamaky an'i Makedonia.
16:6 Ary angamba hitoetra eo aminareo, ary na dia handany ny ririnina, mba hitarika ahy eo an-tanako dalana, isaky ny miala.
16:7 Fa tsy vonona ny hahita anao izao ihany ny mandalo, satria manantena aho mba hitoetra ao aminao nandritra ny fotoana lava, raha sitrapon'ny Tompo.
16:8 Fa izaho dia tsy maintsy hitoetra any Efesosy, na dia mandra-pihavin'ny Pentekosta.
16:9 Fa misy varavarana, lehibe sy tsy azo ialana, dia nosokafana ho ahy, ary koa maro ny mpanohitra.
16:10 Ary raha tonga i Timoty, jereo izany mba ho eo aminareo tsy amin-tahotra. Fa izy manao ny asan 'ny Tompo, tahaka ny ataoko koa.
16:11 Noho izany, aza avela hisy olona hanao tsinontsinona azy. Fa tsy, hitarika azy teny an-dalana soa aman-tsara, ka dia mba tonga atỳ amiko. Fa aho miandry azy mbamin'ny rahalahy.
16:12 Fa ny rahalahy, Apollo, Famelana aho fantatrao fa ny nifandaharako tamin'ny azy indrindra mba handeha ho any aminareo amin'ny rahalahy, ary mazava tsara fa tsy ny sitrapony handeha amin'izao fotoana izao. Fa ho tonga rehefa misy toerana ho azy ny fotoana.
16:13 Aoka ianao ho mailo. Mitsangàna amim-pinoana. Manao zavatra amim-pahasahiana ary hahazo hery amin '.
16:14 Aoka izay rehetra anao ho revo amin'ny fitiavana.
16:15 Ary Miangavy anao aho, rahalahy: Fantatrareo ny taranak'i Stephanus, sy Fortonato, ary ny Achaicus, fa izy ireo no voaloham-bokatra tany Akaia, sady efa nanolo-tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina.
16:16 Noho izany dia tokony ho foto-kevitra ihany koa ny olona toy izany, ary koa izay rehetra miara-miasa sy izay niara-niasa taminy.
16:17 Ankehitriny dia mifaly amin'ny teo anatrehan'i Stephanus sy Fortonato ary Achaicus, satria izay tsy ampy ao anatinareo, efa nanome.
16:18 Fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo. Noho izany, manaiky olona toy izany.
16:19 Ny fiangonana atỳ Asia Manao veloma anareo. Akoila sy Prisila Manao veloma anareo indrindra ao amin'ny Tompo, ny fiangonan 'ny ankohonany, izay izaho koa mba vahiny.
16:20 Manao veloma ny rahalahy rehetra anao. Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina.
16:21 Izany no miarahaba avy amin'ny tanako, Paul.
16:22 Raha misy tsy tia an'i Jesosy Kristy Tompontsika, aoka ho voaozona izy! Maran Atha.
16:23 Enga anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika Ho aminareo rehetra.
16:24 Ny fiantrana dia aminareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Amen.